Ngokuqinisekile abafundi abaningi phakathi abathandi amnandi, ikakhulukazi amakhekhe. Kodwa, ngeshwa, akuzona zonke ukukhokhela ukubhaka Chic ikhekhe elimnandi. Kuyinto ngokuvamile kunzima ukubhaka, kuthatha isikhathi esiningi nomzamo omkhulu. Ngakho ngifuna ukukunika iresiphi ukuze zithole iqebelengwane elula, ingakhokhi ngisho nohlamvu olulodwa, kodwa abaningana. Wokubhaka yabo akudingi amakhono akhethekile isikhathi esiningi, futhi kwaba namiphi imiphumela ezihlwabusayo kakhulu.
Yobuningi bazo zonke izinhlobo amakhekhe namuhla eshaya: isihlabathi, bhisikidi, Puff, Ukhastadi, jelly ... Futhi lokhu akuyona umkhawulo .. Nokho, sibheka iresiphi "Smetannikov" ikhekhe elula.
Ngakho, ukuze ukulungiselela inhlama, sidinga ingilazi amafutha ukhilimu omuncu, inkomishi ushukela, inkomishi kwesigamu ufulawa, a isitashi esincane (ambalwa nezinkezo elikhulu), amaqanda 2, ambalwa wezipuni nge cocoa phezulu, soda slaked noma esikhwameni se-baking powder, 50 amagremu ibhotela, ingcosana usawoti, kolwandle engcono. Ushukela, ukhilimu, amaqanda, isitashi phehla mixer kuze mass homogeneous. Khona-ke kancane kancane ukwethula ufulawa bese uqhubeke whisking. Engeza baking powder noma baking soda hydrated, phehla amaminithi ngaphezulu 2. Sizokwenza baveze inhlama. Okulandelayo, hlukanisa inhlama ibe halves ezimbili alinganayo, kwenye ingxenye engeza nokhokho oyimpuphu, uhlanganise konke kahle, ukugwema izigaxa. Bhaka amakhekhe for isigamu sehora ku kuhhavini osuke usushisa kakade. Ukuzimisela ubuze uthi lokuvungula noma umentshisi. Lapho amakhekhe ikhekhe, ibanike cool. Khona-ke selehlile amakhekhe unciphe ngesigamu - uzothola 4 ikhekhe mncane. Omunye amakhekhe ushokoledi ugaye zibe imvuthu - I- ikhekhe umhlobiso.
Shortcakes zilungele, lungiselela ukhilimu elula. Sizodinga iphakethe ukhilimu omuncu, ushukela kanye ingcosana vanilla. Zonke izithako Ngokuzayo sihlanganise ukhilimu omuncu futhi abashaya kuze mass Fluffy. Coat ukhilimu amakhekhe ukuze ikhekhe chocolate wawuphakathi, ku Imi uthole into efana idube. Ikhekhe eqeda ufafaze ushokoledi chips futhi unike ihora ukuma in the esiqandisini ukuze ikhekhe ofakwe ukhilimu. Futhi zonke ikhekhe "Smetannikov" isilungele, ungakwazi anganelisa emzini wabo ngokuphepha. Lokhu recipe kuyinto ikhekhe elula ingalungiswa nganoma yisiphi iholide. A ikhekhe libukeke - ukuhlobisa izithelo.
Ungadliwa empeleni kakhulu. Kodwa ngokuyisisekelo amakhekhe elula kukhona nezitini kusuka inhlama bhisikidi. Futhi nakhu okunye iresiphi okwamavila izinyo elimnandi.
"Ithemba" ikhekhe. Ukuze silungiselele inhlama sidinga 3 izinkomishi ufulawa kakolweni, amaqanda 3, iphakethe yimiphi ukhilimu omuncu (ngisebenzisa evamile 20% -ing), amathini kwesigamu Ubisi olujiyile, inkomishi walnuts, Amabha amabili ushokoledi (omnyama nomhlophe). Amaphrotheni Nqamula kusuka izikhupha phehla eceleni ushukela a Foam okuqinile. Hlanganisa izikhupha zamaqanda noshukela, sihlanganise ukhilimu omuncu nobisi olujiyile. Engeza walnuts oqoshiwe futhi uhlanganise wonke. Ingxube kwaba izikhupha ufulawa ukwethula izingxenye ezincane, bese ukwethula amaprotheni, zonke uxove kahle. Inani okuholela inhlama ihlukaniswe halves ezimbili, okwaphekwa round fomu. Korzh Ready ake cool.
Nakuba amakhekhe zethu cool, ake ukhilimu. Leresiphi kuyinto ikhekhe elula is kuhlangene ukhilimu kahle elula - kungcono ibhotela (1 iphakethe noma 200 amagremu) kanye Ubisi olujiyile (asele ½ namakani). Zonke sihlanganise uphehle kuze bushelelezi.
Lapho amakhekhe selehlile, usike ngokucophelela nabo nengxenye, uthola 4 amakhekhe. Ngokulandelayo, akha ikhekhe, beka amakhekhe coat ne ukhilimu. Top ikhekhe ukuhlobisa ushokoledi vukuza, kushintshana amnyama namhlophe. ikhekhe Simple futhi econsisa usulungile, kungenziwa yanikezwa leli tiye.
Ungenza kube lula, ukuthenga ikhilogremu iyiphi ikhukhi, sidilike ke u hlanganise ubisi olujiyile ne yakha indunduma. Lokhu ikhekhe is ngenye futhi ngokuthi "Ant." It kuvela ke lokudla okumnandi kakhulu futhi kuyasiza uma izingane ukubuza okuthile esihlwabusayo. Ngakho angapheka ikhekhe, ngisho amavila kakhulu!
Cream "Tafita": iresiphi ngesithombe
Umthandazo sabaqashi. Amandla omthandazo